ကဲအောက်မှာယူလိုက်ပါ . သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ password တွေ မကျန်ခဲ့အောင်လို့ အပြောင်ရှင်း ရတာပါ .tmp နှင့် အခြား မလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုလဲ ရှင်းလင်းပေးပါတယ် .ကျွန်တော်တို့ IE, Firefox, Opera, နဲ့ တစ်ခြား browser တွေကိုသုံးပြီးတော့ အင်တာနက်ဝင်မယ် email စစ်မယ်ဆိုရင် cookies နဲ့ တစ်ခြား အချက်အလက်တွေ ကျန်ခဲ့နိုင်တယ် . အဲ့ဒီ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ဘာအချက်အလက်မှ မကျန်ခဲ့အောင်လို့ ccleaner ကိုအသုံးပြုပြီး အပြောင်ရှင်းခဲ့နိုင်ပါတယ် . စမ်းချင်သူများ စမ်းကြည့်ပါဦး . ကျွန်တော်တော့ အလုပ်များနေလို့ . အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းကို နောက်မှပဲရေးပေးပါ့မယ် . လွယ်ပါတယ် စမ်းကြည့်ကြပါ .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:28 AM